पौष १७, शनिबार
सन् २०२२ नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार नेप्सेले भोलि आइतबार जनवरी २ बाट सुरुवात गर्ने छ । विगत ६ महिना यता नेप्से लगातार घटेर निराश बन्न पुगेका लगानिकर्ताहरु यस वर्ष केहि सुखद रहने विश्वस्त रहेका छन् ।
कस्तो रह्ययो नेप्से २०२१ मा ?
जनवरी ३, सन् २०२१ मा २१०४.८५ बाट सुरु भएको नेप्से वर्षको अन्तिम दिन डिसेम्बर २९ मा २६२८.६९ मा पुगेर बन्द भएको हो । सन् २०२१ मा नेप्से १९% अंकले वृद्धि भएको छ । यस अन्तरालमा नेप्से करिब ५४% अंकले बढेर ३२२७.११ को उचाइसम्म पुगेको थियो ।
प्राविधिक विश्लेषणबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त ?
नेप्सेले वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बरमा ह्याम्मर क्यान्डल बनाएको छ । डाउनट्रेण्डमा नेप्सेले राम्रो ह्याम्मर क्यान्डल बनाएको छ जसले आगामी महिना नेप्से बढ्ने संकेत दिन्छ ।
नेप्से एउटा सपोर्ट जोनमा आएर बन्द हुनुले पनि आगामी वर्ष नेप्से बढ्ने देखिएको छ ।
Fibonacci Retracement लगाएर हेर्ने हो भने पनि नेप्से ५०% को लेभल नजिकै पुगेर पुन ३८.२% को लेभलमा फर्केको छ । यसले पनि नेप्से अब बढ्ने सम्भावना रहेको देखाउछ ।
अरु गतिविधि के-कस्ता थिए ?
यस वर्ष नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने क्रम जारी रहि कारोबार रकममा नयाँ इतिहास रचेको थियो । डिम्याट अकाउन्ट बनाउने मान्छेहरु पनि यो वर्ष अत्याधिक बढेका थिए ।
पहिलो ६ महिना द्रुत गतिले बढेको नेप्से पछिल्लो ६ महिना देखि निरन्तर ओरालो लागेको थियो । पुँजी बजारको नियामक निकायहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यगद्दी पनि खाली रहेका छन् । विगत ४ महिना देखि यि दुबै निकाय नेतृत्व बिहीन रहेका छन् ।
किन घट्दै छ नेप्से ?
सरकारको अस्थिरता, सरकारको निति नियम र राजनितिक दलका नेताहरूको खराब अभिव्यक्तिले नेप्से लगातार खसेको हो । यस्तै, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यगद्दी खाली रहनु र नेप्सेमा अनुशासन कायम नरहनुले पनि नेप्से ओरालो लागिरहेको लगानिकर्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।
सन् २०२१ मा केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक निति मार्फत सेयर कर्जाको सीमा ४/१२ करोडमा सीमित गर्नु ले पनि बजार घटेको थियो । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो ९०% बनाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नु र यसको बिरोधमा लगानिकर्ताहरु आमरण अनसन बस्नु र पुँजी बजारबाट टाढा रहनुले पनि बजार विगत ६ महिना यता घट्नुको मूख्य कारण हुनसक्छ । साथै, नेपालमा रहेको तरलताको अभावले पनि नेप्से निरन्तर ओरालो झरेको हो ।